Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. फेसबुकले बेहोर्‍यो हालसम्मकै सबभन्दा खराब समस्या – Emountain TV
एजेन्सी, ३० फागुन । फेसबुकका सेवाहरूमा विश्वभर अवरोधहरु देखा परेका छन् । ती खराबी फेसबुकले हालसम्म बेहोरेको मध्येकै सबभन्दा खराब छन् । नेपाली समय अनुसार बुधवार राति १० बजे आसपासबाट त्यस्तो समस्या देखिन थालेको बताइएको छ ।
फेसबुक बाहेक म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राममा समेत अवरोधहरु देखिएका थिए जसको कारण भने अहिलेसम्म केही सार्वजनिक गरिएको छैन । फेसबुक खुले पनि त्यसमा सामग्रीहरु प्रकाशित हुन सकेका छैनन् ।
म्यासेन्जरको मोबाइल एपले कतै कतै काम गरेको छ तर उसको डेस्कटप संस्करणमा भने समस्या देखिएको छ । ह्वाट्सएपमा यसको असर देखिएको छैन।
“फेसबुकका विभिन्न एपहरूमा कतिपय मानिसले पहुँच पाउन नसकिरहेको बारे हामीलाई जानकारी छ । हामी ती समस्या छिटै समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ,” फेसबुकले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिएको हल्ला गलत भएको भन्दै डिडिओएस नामक एक किसिमको साइबर हमलाका कारण फेसबुकका सेवामा अवरोध नआएको उसले जनाएको छ । अवरोध निगरानी गर्नेहरूका अनुसार फेसबुकमा समस्या विश्वभर नै देखिएको छ ।
यो भन्दा पहिले फेसबुकले सन् २००८ मा यस्तो सेवा अवरोध बेहोरेको थियो । त्यतिखेर विश्वभर उसका प्रयोगकर्ता केवल १५ करोड थिए । अहिले त्यो संख्या बढेर मासिक दुई अर्ब तीस करोड प्रयोगकर्ता पुगिसक्यो ।
गुगलद्वारा हुवावेसंग गर्दै आएको प्राविधिक कारोवारमा रोक
अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन सकिदैन: शिक्षा मन्त्री
मन्त्री बास्कोटाद्वारा गोरखापत्रको कामप्रति असन्तुष्टि, काममा सुधार नभए विकल्प खोज्ने चेतावनी
नेपाली संचारमाध्यमले बाटो बिराएको संचारमन्त्रीको टिप्पणी
यसरी बच्छ कम्प्युटर भाइरसबाट